Somaliland: Qaran 10 Geedi hore u guuraya 40 maalmood gudahood..Warbixin. |
Somaliland: Qaran 10 Geedi hore u guuraya 40 maalmood gudahood..Warbixin.
Hargeysa-Somaliland 25-ka maalmood ee soo socda waxay dhamaystiraysaa hayaan cusub oo ay 10 geedi oo ay hore uga guurayso mustawihii ay caalamka kaga jirtay 26-kii sannadood ee ay jirtay.
Maxkamadda Dastuuriga ah ee Somaliland, ayaa awood u leh inay ka garnaqdo haddii muran ka yimaado natiijada Doorashada.
Ugu yaraan laba jeer oo Khilaaf ka dhashay Doorashooyinkii dalka ka dhacay, Maxkamadda ayaa dhegeystay Dacwadihii laga soo gudbiyey. Murrankii ugu adkaa ee Doorasho wuxuu dhacay sanadkii 2012-ka, kaasoo ay sagaal lix Urur-siyaasaddeed qaadaceen natiijadii Doorashada Golaha Deegaanka.
Muuqaalka Murrashaxiinta, Faysal iyo Cabdiraxmaan Cirro, waxay leeyihiin Bidaar, midabkooduna waa casaan.
Muuse Biixi ayaa ah isagu Nin Madow oo dherer ahaan ka dheer labada Murrashax ee kale.
La soco Warbixino kale oo la xidhiidha Doorashadan…